Izintshisekelo ezi-4 mayelana neziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngiyazithanda izivunguvungu. Zingabhubhisa kakhulu, kepha angicabangi ukuthi kufanele ubesabe, kodwa inhlonipho. Ngakho-ke singazimisela ukuwaqonda, siwatadishe, okuzosisiza ukuwabikezela ngokunembile, sigweme imiphumela eyinhlekelele.
Lezi zimo zezulu ziye zaba ngabalingisi bamafilimu athile, njengalawo kaTwister noma lawo Esweni lesiphepho. Kepha yini oyaziyo ngabo? Nakhu onakho Izintshisekelo ezi-4 mayelana neziphepho lokho, impela, kuyakumangaza.
1 1. - United States, indawo lapho iziphepho zenzeka khona kakhulu
2 2.- 500km / h, ijubane elimangalisayo lomoya wenkanyamba
3 3.- Izinkanyamba kwesinye isikhathi zihamba ngamaqembu
4 4. - Ungalokothi uthathe phansi amandla esiphepho
1. - United States, indawo lapho iziphepho zenzeka khona kakhulu
Kulesi sifunda sezinkanyamba zomhlaba kuvamile phakathi nezinyanga zasentwasahlobo (Ephreli-Meyi). Kuningi kakhulu okukhiqizwayo okukholelwa ukuthi Ama-75% awo akhiwa lapho, ikakhulukazi eTornado Corridor, okuyindawo efaka izingxenye zaseTexas, Oklahoma, Kansas naseNebraska.
Zakha kuphi iziphepho ezingama-25% ezisele? Emhlabeni wonke ngaphandle kwe-Antarctica.
2.- 500km / h, ijubane elimangalisayo lomoya wenkanyamba
Umoya onamandla kakhulu ukhiqizwa ngaphakathi kwesiphepho. Okwamanje ayikulinganiswa ncamashi, kodwa izilinganiso zingenziwa. Ngakho-ke, ungatshela ukuthi umoya ovela enkanyamba eyakha e-Oklahoma ngo-1999 wavunguza ngejubane elimangalisayo le- 500km / h.
3.- Izinkanyamba kwesinye isikhathi zihamba ngamaqembu
Yilokho okwaziwa ngokuthi yi "Wave of tornadoes» noma iTornado Outbreak ngesiNgisi. E-United States bangakha amaqembu afinyelela ku- 24, yize into ejwayelekile ukuthi basuka ku-6 kuye ku-10.
4. - Ungalokothi uthathe phansi amandla esiphepho
Noma uzithanda kangakanani lezi zenzakalo, uma ungahambi nemoto efanelekile futhi uma ungenalo ulwazi olufanele, akudingeki usondele kakhulu. Okufanele ukuhlala njalo kude kude kune-2km. Gcina engqondweni ngaso sonke isikhathi ukuthi iziphepho, uma zinamandla njengalezo ze-F4 noma i-F5, zingaqhuma amaloli, izimoto, zibhubhise izindlu, zisiphule nezihlahla.
Ucabangani ngeziphepho? Uyabathanda?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izintshisekelo ezi-4 mayelana neziphepho